Bar internet oo sahlaysa lacag dirida - BBC News Somali
Bar internet oo sahlaysa lacag dirida
23 Nofembar 2011
Bangiga Adduunka ayaa ku qiyaasaya in dadka Afrikaanka ee dibadda ku nool ay u diraan afartan bilyan oo dollar reerkooda iyo saaxiibadooda wadankooda jooga.
Lacagtan ay soo diraan dadka dibadda ku nool ayaa mihiim u ah dadka iyo Qaarada.
Waa wax fiican markii addeega lacag dirista la hormarinaayo. Guddiga Midowga Afrika iyo Bangiga Adduunka ayaa sameeyay bar internet oo dadka u fududaynayso lacag dirista.
Massimo Cirasino waa madaxa kaabayaasha adeega lacagaha ee Bangiga Adduunka, Sophie Ikenye ayaa waydiisay inuu macneeyo sida uu u shaqaynayo barta internetka ee ay u sameeyeen macaamiisha lacagaha dirto.
Xoolihii ugu badnaaa ayaa ka baxay dekadda Berbera sanadkan iyadoo lagu kordhiyay dekadda Maxraj labaad.
Tirada xoolaha sanadkan ka dhoofay Dekedda Berbera iyo adeegyada ay u qabtaan ganacsiga xoolaha si uu ula tartamo sayladaha caalamiga, Wasiirka wasaaradda xanaanada Xoolaha ee Somaliland Cabdi aw Daahir ayaa uga waramay Weriyaha BBC-da ee Hargeysa Axmed Saciid Cige ayuu.
Tan iyo bishii Augst lacagta Kenya ayaa qiimaheedu uu hoos u dhacayay markii loo badalayo Dollar. Halkii Dollar ayaa lagu sarifi jiray 80 shilinka Lenya,wuxuuna mar kor u dhaafaty sarifka halkii dollar 100 shilinka Kenya.
Dowladda ayaa doonaysa inay wax ka qabato hoos u dhaca qiimaha shilinka Kenya. Bilow Keerow waa xisaabiye horayna uga tirsanaan jiray Baarlamaanka Kenya .
Maxamuud Cali ayaa arrintan ka waraystay.
Maqal Ahmiyad noocee ah ayay leeyihiin xawaaladaha lacagaha ee Soomaalidu adeegsadaan?
Ahmiyad noocee ah ayay leeyihiin xawaaladaha lacagaha ee Soomaalidu adeegsadaan?